Tababaraha Chelsea ee Frank Lampard ayaa doonaya in Stamford Bridge uu keeno 21 jirka khadka dhexe uga ciyaara West Ham ee Declan Rice. Haddii uu laacibkani tago Chelsea, waxay daaqadda ka bixi doona Jorginho oo ay doonayso Arsenal. (Mirror)
Paris St-Germain waxay xiisaynaysaa difaaca Chelsea ee Antonio Rudiger laakiin waxay doonaysaa inay aragto haddii 27 jirkan reer Germany lagu heli karayo amaah ama heshiis rasmi ah. (Telegraph)
Tottenham ayaa wada-hadallo kula jirta difaaca Inter Milan iyo xulka qaranka Slovakia ee Milan Skriniar oo 25 jir ah, balse laguma qasbi doono inay ogolaato lacagta Inter Milan ku qiimaysay ee £55 milyan ee Gini. (Sun)
Inter Milan waxay doonaysaa inay u dhaqaaqdo saxeexa difaaca Manchester United iyo xulka England ee Chris Smalling oo 30 jir ah, haddii ay Tottenham ka iibiyaan Skriniar. (Football Italia)
Inter waxa kale oo ay xiisaynaysaa inay Chelsea kala soo wareegto laacibka khadka dhexe ee N’Golo Kante xagaagan, waxaana hawshan dabada ka riixaya tababare Antonio Conte oo doonaya inuu mar kale la midoobo 28 jirkan. (Gazetteo dello Sport)
Sevilla ayaa filaysa inay adkaan doonto inay diido haddii Manchester City ay dalab labaad kasoo gudbiso difaaca reer France ee Jules Kounde oo qiimihiisa lagu sheegay 65 milyan oo Euro illaa 70 milyan oo Euro inta u dhaxaysa. (ESPN)
Arsenal ayaa dalab £32 milyan oo Gini ah ka gudbisay kubbad-sameeyaha Lyon ee Houssem Aouar oo 22 jir ah, laakiin kooxda reer France ayaa doonaysa in la bixiyo £54 milyan oo Gini. (RMC Sport)
Aouar waxa heshiis shaqsi ah la gaadhay Arsenal, xilli Manchester City iyo Juventus ay doonayeen inay la saxeexdaan. (Telefoot
Weeraryahanka reer Netherlands ee Memphis Depay oo afka hore uga ciyaara Lyon ayaa kusoo baxay bartilmaameedka koowaad ee Barcelona si uu ugu beddelo Luis Suarez.
20 jirka weerarka uga ciyaara Liverpool ee Rhian Brewster ayaa doonaya inuu tago Sheffield United laakiin waxa si weyyn u doonaya Aston Villa iyo Brighton. (Sheffield Star)
Leeds United waxay doonaysaa 22 jirka khadka dhexe ee reer Netherlands ee Teun Koopmeiners oo u ciyaara AZ Alkmaar. (Telegraph)
Tababaraha Chelsea ee Frank Lamaprd waxa uu qorshaynayaa inuu wada-hadal la yeesho goolhyaha reer Spain ee Kepa Arrizabalga oo 25 jir ah, ayna meel saaraan mustaqbalkiisa kaddib markii ay Blues lasoo saxeexatay goolhayaha reer Senegal ee Edoaurd Mendy oo 28 jir ah. (Star)
Taliska ciidanka Xoogga dalka oo sheegay in ay 40 caruur ah
Al-Shabab says they executes spy agent and soldier in Somalia